Siyaabaha ka Android Phone soo dir SMS Isticmaalka Computer ah
Sababaha SMS diritaanka ka Computer
Waxaa jiri kara sababo badan oo aad ku dhiirrigali in ay SMS ka computer diro. A yar oo iyaga ka mid ah waxaa ka mid ah:
Fududee ee makiinada - Dadka intooda badan ayaa weli u arkaan in ay si raaxo leh in ay isticmaalaan keyboard ah PC buuxa, halka aad qortid halkii laga faaiidaysanayo furayaasha shaashadda yar ee telefoonka gacanta. Sms diritaanka ka pc u ogolaanaya in ay isticmaalaan keyboard iyo nooca farriimaha fudud.
Maamulka Easy iyo Quick Xulashada Marka laga xaqiiqada ah in taleefanada moobaylka ah waxaa noqonee qaadan la maalin kasta marayay, kombuyuutar oo ay weli ay soo jiidashada iyo dadka isticmaala si fudud oo si deg deg shaqayn karaan oo ay u maarayno waxyaalaha ku computer ah halkii telefoonka ah. Isticmaalka kumbiyuutar si SMS diri saamaxaya kuwa isticmaala in ay doortaan dadka qaata badan, maareeyaan Farriinta jira, iyo nooca iyo soo dira cusub si deg deg ah halkii.
Dhimay Data Kharashka (Mararka qaarkood Free) - goobood oo badan ayaa bixiya adeegyada fariimaha si xor ah u isticmaala. Meelaha qaar xataa ogolaan dadka isticmaala si ay u soo diro SMS adduunka oo dhan oo aan wax alla wixii lagu eedeeyay. Habkani users siineysaa fududaato in aad qortid iyo sms diraya lacag la'aan ah.
Isticmaalka Wondershare MobileGo soo dir SMS ka Computer
Haddii aad leedahay casriga ah Android, ay u badan tahay habka ugu fudud ee ay u soo diri SMS ah oo ka your computer waa adiga oo isticmaalaya barnaamijka wax ku ool ah sida Wondershare MobileGo. MobileGo ma aha oo kaliya kaa caawinaysaa in aad haddiiba u cid dira fariimaha, laakiin waxa ay sidoo kale iyaga maamushaa si karti leh oo iyaga ku tusaysaa shaashadda kombiyuutarka ee interface ah si sahlan loo aragtida.
Ka dib marka aad si guul leh u soo bixi ayaa oo ku rakiban Wondershare MobileGo on your computer, waxaad raaci karaan tilmaamaha hoose la siiyaa SMS ka PC soo dir:
1. Daahfurka Wondershare MobileGo by double-gujinaya ay toobiye icon.
2.Connect telefoonka aad Android inay PC isticmaalaya cable xogta oo u yimid ay la socdaan waxaa la wakhtiga heshiiska waxiibsashada.
3.Wait ilaa MobileGo Wondershare ogaadaa aad telefoon oo ku rakibtay darawalladu ay taageerayaan labada aad kombuutarka iyo Android phone / kiniin. (Mid ka mid ah habka waqti)
4.On telefoonka aad Android, marka baxdo, ee ogolow USB sanduuqa debugging soo bandhigay, ka jaftaa si aad u hubiso ka Had iyo jeer u ogolaan checkbox computer iyo riix OK in ay sii wadaan.
5.Once sameeyo, dib aad kombuutarka, ka bandhigay Wondershare MobileGo ee interface ah, guji si loo xusho SMS category ka Murayaad bidix.
6. Laga bilaabo sare ee Murayaad xarunta, riix New button.
7.On u soo diray farriin sanduuqa, in ka Si aad u soo shirtagi, ku qor tirada mobile ah qaataha.
8.Alternatively, waxaad sidoo kale riixi kartaa batoonka Contact Select ka xaq ah Si aad u soo shirtagi soo qaado xidhiidhiye ah ama in ay doortaan xiriirada kala duwan.
9.From liiska xiriirada laga heli karo ee Dooro Xiriirada sanduuqa, hubi checkboxes matalaya xiriirrada oo aad rabto in aad soo dirto SMS ah oo guji OK . Fiiro gaar ah : The Dooro Xiriirada sanduuqa soo bandhigay dhammaan dadka ay khuseyso in aad telefoonka ee xiriirada liiska uu leeyahay.
10.Back ku soo diray farriin sanduuqa, qor fariin ee Content beerta.
11.Click dir si ay u soo diro farriin ah in qofka qaataha ah wuxuu soo xulay (s).
Waxa intaa dheer in kor ku xusan, Wondershare MobileGo sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan qalab Android aad Dhan dusha ugu yaraan. A qaababka kale ee yar Wondershare MobileGo uu leeyahay waxaa ka mid ah:
De-nuqul si loo maareeyo xiriirrada nuqul liiska telefoonka ee xiriir.
Kaabta One-Click waxay sahlaysaa in ay dib u kor xogta aad telefoonka ee fudayd. Xogta xoojiyaa la soo celin karin mar kasta oo loo baahan yahay adigoo isticmaalaya Wondershare MobileGo ee Soo Celinta doorasho.
Data Recovery kabanayso faylasha tirtiray ka telefoonka aad ku dhacdo, iyaga laguma xoojiyaa.
Data Eraser si buuxda u tirtiro xogta ka telefoonka, kana dhigaysa unrecoverable. Tani waa mid waxtar leh markii aad rabtid in aad iibin ama xoorin telefoonka off.
Diritaanka SMS Isticmaalka Internetka Online
Haddii aadan rabin in ay isticmaalaan barnaamij kasta oo si SMS cid dir oo soo mana aad rabto in aad isticmaasho mobile aad ah inay sidaa sameeyaan, doorasho kale ahaan lahayd in ay isticmaalaan adeegyada ay bixiyaan websites ka. Qaar ka mid ah website-yada in ay u oggolaadaan in aad SMS u diro taleefanka gacanta oo dunida ka mid ah:
http://www.smsfun.com.au/ TTP: //www.smsfun.com.au/Yet website kale u soo dirto SMS oo bilaash ah caalamka oo dhan. New qoraalka 4 Free, aad haatan soo diri kartaa lifaaqa ah dadka qaata in loo dhiibaa iyaga oo ay la socdaan SMS ah. Si kastaba ha ahaatee, si uu u soo diro SMS si xor ah u qaata, waa in aad ogaado magaca adeeg bixiyaha ay. Sidoo kale, waa in aad naftaada u caddeeyaan aadanaha ah oo ay dib-u-aad qortid code ah oo soo bandhigay bogga beerta ku siin, ka hor inta uusan goobta kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto fariimo ah.
http://www.text4free.net/ ertisements, SMSfun - website lacag la'aan ah adeega SMS qurbaan - weli kaalinta wanaagsan. Iyadoo SMSFun, in aad teleefoonada gacanta ku soo diri kartaa fariimaha ee inta badan gobollada in adduunka oo dhan qiimo ma at dhan. Habka calaamad-up wuxuu u baahan yahay magacaaga, cinwaanka emailkaaga, oo tirada mobile. Haddii kale waxa kale oo aad ku xidhan karto xisaabtaada Facebook hal-click calaamad-up.
DIR SMS NOW
http://www.sendsmsnow.com/ website A bixiya adeegyada SMS oo bilaash ah caalamka oo dhan la interface aad u nadiif ah oo toos ah. Si ka duwan websites kale SMS oo bilaash ah, DIR SMS NOW kuu ogolaanayaa inaad si ay u doortaan dalka Ahaado, ku qor lambarka telefoonka, oo qor fariin qoraal sax ah ay homepage laftiisa. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa, aad naftaada ka diiwaan gashan lacag la'aan ah oo aad ku fiican tahay inuu tago.
SMS diritaanka ka your computer waa mid xiiso leh gaar ahaan marka aad leedahay barnaamij hufan oo smart sida MobileGo Wondershare. Your waayo-aragnimo user noqdo ka xiiso badan yahay marka aad leedahay fursado si SMS diri dunida oo lacag la'aan ah.
Articles More laga yaabaa inaad jeceshahay a
> Resource > Android > 4 Siyaabaha ka Computer dir SMS si ay Android Phone